Easter Festivities In Europe You Can't Miss | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Easter xaflado In Europe Waxaad Ku Cayaarin karaa
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo(Last Updated On: 02/05/2020)
xaflado Easter in Europe kala duwan dalka dalka oo magaalo ilaa magaalo. Waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn oo ugu da'da weyn ciidaha oo ka mid ah Christian Church. Easter waa dabaal sarakicidda Ciise Masiix oo xabaashii laga.
Taariikhda dabaal for Easter badala sanad kasta. Waxaa caadi ahaan u dabaal on Sunday ugu horreeya ka dib markuu dayaxu caddo buuxda ka dib markii maailnta guga. Waxay dhacdaa waqtiyo kala duwan sanad kasta, laga bilaabo dabayaaqadii March si ay u soo daahay April.
In Masiixiyada, Week Quduuska ah waa toddobaadka Easter ka hor iyo ka mid Palm Sunday, skærtorsdag, Jimce Wanaagsan iyo Saturday Quduuska ah. In Europe, dalal badan Easter dabaal by shidida dabka weyn yihiin in mararka qaarkood loo yaqaan dabka Yuudas. Markii hore, dabshid, kuwaas oo loogu tala galay in ay u dabaal ay ka imanayaan guga. Halkan waxa aad ku arki deg deg ah sida qaar ka mid ah dalalka aad ugu jeceshahay Yurub dabaal Easter.
Laga bilaabo Easter ee Netherlands ayaa
In Holland, diyaar Easter bilaabi maalin ka hor deymin. Maanta waxaa loo yaqaan "Vastenavond" ama Fast Eve. Inta lagu jiro wakhtigan, Netherlands ayaa jecel yahay hirka ugu weyn ee dalxiisayaasha shisheeye oo raba inay ka qayb-xaflado ay.
Dadka ka qayb kaniisad adeegyada Easter taas oo inta badan la socdaan xafladda a cuntada. Kids tag on raadinta ukunta in search of dhalaalaysa qurxiyey ukun la kariyey ama ukunta shukulaatada. Mulkiilaha Tikken waa ciyaar jecel Easter diidanyihiin dadka wada garaacayaa ukunta. Ujeedada kulanka waxay tahay in crack ukunta qofka kale ee aan jabiyay idinkaa.
Antwerp in Tareenadu Breda
Easter xaflado ee France
Faransiis The dabaal Easter by dhigata adeeg kaniisad gaar ah, cuntada ka dabaaldegga, iyo Easter ukunta ugaarsi. Waxaad arki doontaa dukaamada iyo dubayaasha la bakaylaha shukulaatada, dawanno, iyo calaamadaha guga.
Faransiiska ayaa sidoo kale jecel ukunta shukulaatada, iyaga oo isticmaalaya ballaaran for raadinta ukunta Easter carruurta. Faransiiska ayaa sidoo kale tartan ukun-rogid ah oo ku lug leh diidanaa ukunta cayriin ka daadanaya meel sare. Waxaa kaloo jira kulan carruurta ku lug leh wadatey ukunta cusub ee hawada. The first to jebin ukun la go'aamiyo khasaare ah kaas oo ku siin doonaa qaar ka mid ah ay nacnac inay cunug kale.
An dhaqan Easter xiiso leh in France waa volantes cloches ama "dawanno duulaya." No Dawanka kiniisadda giraanta u dhexeeya subaxdii jimcaha iyo Easter Sunday. Waxaa keliya ka dib markii adeeg kaniisad Easter Sunday in giraanta dawanno, dabaal sarakicidda Ciise. France waxaa sidoo kale loo yaqaan for its reenactments Wadho.
Easter xaflado ee Italy
Easter in Italy waa in loo gudbiyaa by Talyaaniga sida La Pasqua. Si ka duwan kan kale dal oo Yurub ah, ma waxaad arki doontaa bakayle Easter ama raadinta ukunta Easter ee Italy. dabaal Tani farxadeed oo dhan waa ku saabsan dhaqanka la jecel yahay.
adag qaadan diinta waxaa la qabtaa magaalooyinka Talyaani iyo magaalooyinka Jimcihii iyo Sabtidii Easter ka hor. On Sunday Easter, filan cuntada si ay door muhiim ah in dabaal cayaari. Waxaa caado u ah dabbaaldegyada in lagu daro artichokes iyo Angelino ama wan yar oo la dubay oo kuwa go '. Oo dadkii oo qoolley oo-qaabeeya ama wax taaj oo-qaabeeya kibis sida hadiyado la siiyo.
In Rome, vigil ayaa ka dhacaya St. Basilica Peter ayaa Sabtidii Quduuska ah. Waxaa ay ku bilaabataa at 9 pm iyo tagaa on ilaa habeenbadhkii sida ay keentaa in bilowga subax Easter. On Sunday Easter, mass ugu sugayay bilaabmaa Pope ka bixinta barako on balbalada.
Sababtoo ah ee Pope iyo Vatican-ka, Rome waa meel loogu talagalay xaflado Easter in Europe. Dadku waa ay yimaadaan oo dhan ka dacaladeeda inay ka qayb qaataan dabaal iyo ka qayb galaan Vatican Palm Sunday mass. Sababtoo ah waa free, waxaa ka heli kartaa quruxsan buuxo.
Haddii aad qorsheyneyso in ay ka qayb mass Easter ee Rome, waxaa fiican in hore jartaan tikidhka aad. Ballansan kuraasta aad ka hor inay ku raaxaystaan ​​heerka ugu fiican. Sababta oo ah dadka ka mid ah xaflado Easter in magaalooyinka sida Rome, Paris, iyo Amsterdam, waxaa had iyo jeer kuwa caqliga leh si ay u qorsheeyaan.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feaster-festivities-europe%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Festivities qorraxda europetravel longtrainjourneys talooyin trainjourney Tranride caarada tababarka tareen safarka travelfrance travelnetherlands